Ukusuka eAmsterdam kunye nenye into - iGeofumadas
Amsterdam and more
Ngo-Okthobha, 2010 egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Uhambo olude kakhulu. Iiyure ezi-2 ukusuka kuMbindi Merika ukuya eMiami, iiyure ezi-8 ukuya eLondon, 1 ngaphezulu ukuya eAmsterdam: kongezwe iiyure ezi-6 zonxibelelwano, bafikelela kwi-17.
Iwotshi yebhayoloji iyasetyenziselwa emva kokulala njengebhere kwinqwelomoya. Kodwa hayi isisu okwangoku; ke ezinzulwini zobusuku kuye kwafuneka ndifumane ikofu kunye nekhekhe.
Ukuwela usuka eBoston uye e-UK kwakusasa, kunye no-59 Celsius ngaphandle kwaye uhamba ngokuchasene nolwabiwo… ngokuqinisekileyo akunakuthelekiswa.
Okwangoku, amalungiselelo nje, umhlobo wam uJuan, umSpanish osebenze eHolland iminyaka ukwitafile yokurekhoda ecaleni kukaChristine obalaseleyo.Okwigumbi eliphambili balungiselela iaudiyo ethathwe kwiidrowa ezinkulu, ziqhelanisa neziphumo kunye neelebheli zendawo kumagumbi okufundela. Yonke into eyenzeka ngaphambili, kwaye akukho mntu ucinga kwi gala.
Enye yeebhanile yatsala umdla wam, owamkelekileyo ngeelwimi zamazwe amelweyo. Isitayile lilifu lethegi yomxholo kwiibhloko kunye neWordPress ezenziwe ngemfashini.
Indawo yokuhlala eWyndham Apollo Ihotele ihlala ilungile kakhulu. Akukho nto ilahlekileyo phantse kuyo nayiphi na ihotele ekulungele ukundwendwela eMelika: Inethiwekhi engenazingcingo.
Banikezela ngenkonzo ye-Intanethi kumabonwakude, kodwa kukutsala. Imouse liqhosha ekufuneka lisongwe njengalezo iibhola zibomvu zeelaptops zokuqala. Inkonzo ye-LAN ye-10 yeeYure ngeyure ibonakala ngathi iphanga ... njengoko ndingathi Obelix:
Nederlanders zijn gek.
Nemozulu; uyolo. I-8 degrees Celsius ngokusemgangathweni.
Akukho nto yokwenza nemeko-bume yeCaribbean, kodwa kwaba bantu lilungelo lokuba nelanga ngeyure ezimbalwa ngeyoku-1 emva kwemini, kanye lixesha lokuba uninzi lwamashishini luvuleke. Ixesha lokuba abanye abantu abadala basebenzise ithuba lokuphuma baye kwikhefi esecaleni kwendlela bakhulule isikhafu sabo okwethutyana.Amakhwenkwe am, kwelinye icala abanakundifumana; Umahluko weeyure eziyi-8 awubaniki tu ukuba bandishiyele imiyalezo kwaye bandincede ukugcina iinkomo ziphila. kwifama.
Okwangoku ngomso, ukufumana iadaptha yamandla kunye ne-Obelix chess eqokelelweyo iseti de iqabaka liwele. Kwaye ke ukubalekela kwigumbi lobushushu kubushushu be mara Abalandeli be-xfm, abaneCappuccino kunye ne-amaretto kunye ne-sushi evela kwindawo yokutyela yaseJapan i-Yamazato.
Ukwahluka okukhulu nangonyaka odlulileyo, eli xesha alihambelani neyokugqibela kweNdebe yeHlabathi yeNdebe, nangona ilizwe lam, abaninzi bathi uMongameli uLobo unalo kakuhle i-pajama. Ezi ngxaki zoxinzelelo lwasentlalweni, ngethemba kwaye ingxaki enye ayibuyi, eyangaphambili ayikapheli.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Jonga kwi-gvSIG 1.10
Post Next Ukuxhaphaza i-Twitter: Qhu fumlelwaOkulandelayo »